पाटन अस्पतालबाहिर एउटा नाटकीय ठगी: औषधि लिन बाहिर आएका कुरुवाले सबै पैसा बुझाए – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/पाटन अस्पतालबाहिर एउटा नाटकीय ठगी: औषधि लिन बाहिर आएका कुरुवाले सबै पैसा बुझाए
पाटन अस्पतालबाहिर एउटा नाटकीय ठगी: औषधि लिन बाहिर आएका कुरुवाले सबै पैसा बुझाए
काठमाडौँ– चिकित्सकले औषधिको नाम लेखिदिएपछि विरामी छोराको कुरुवा बसिरहेका भक्तबिर राई जेठ २ गते बिहानै पाटन अस्पतालबाहिर रहेको क्लिनिकमा निस्किए।
सडक किनारमा स्कुटी लिएर बसिरहेका एक व्यक्ति राईलाई देख्ने वित्तिकै दगुर्दै नजिकै आए। सुनसान सडकमा त्यसरी मान्छे दगुर्दै आउँदा राईलाई लाग्यो- मलाई चिनेको हुनुपर्छ। ती व्यक्तिले चिनेजाने जत्तिकै गरेर सोधिखोजी गर्न थाले। राईले छोरा विरामी भएर पाटन अस्पतालमा राखिरहेको र अहिले औषधि लिन बाहिर आएको बताए। राई यति विश्वस्त भएकी ‘यो मान्छेले मलाई चिनेको रहेछ। हामी एकै ठाउँका रहेछौँ।’
‘ओहो, यस्तो लकडाउनका बेला तपाईलाई कति गाह्रो भइरहेको होला। उपचार गर्ने पैसा के कति छ? अप्ठेरोमा काम लाग्ने भनेको गाउँठाउँकै मान्छे त हो नी’, ती व्यक्तिले भने। राईलाई कहिलेसम्म काठमाडौं बस्नुपर्छ यकिन थिएन। उपचारमा कति पैसा लाग्छ, त्यो पनि निश्चित थिएन। सोलुखुम्बुको माता दुघकोशी घर भएका राई केही समयअघि उपचारका लागि छोरा लिएर काठमाडौं आएका थिए।
गोजीमा राखेको एक लाख रुपैयाँ देखाउँदै उनले भने, ‘यी, अब जम्मा एक लाख रुपैयाँ छ। यो सकिएपछि त बिजोग नै होला।’ती व्यक्ति राईको अझ नजिक भए। उनले साथ भरोसा दिने आश्वास दिलाए। ‘ओहो, पैसा त धेरै लाग्छ सक्छ। ठिक छ, मसँग एक लाख रुपैयाँ छ त्यो लिइ राख्नुस्’, उनले भने।
आफ्नो पैसा बैंकमा रहेकाले अहिले नै लिन भन्दै राईलाई स्कुटीमा चढाएर त्यसतर्फ बैंक खोज्दै हिँडे। दुई तीनवटा बैंक डुलाएपछि ‘एकछिन यहाँ बस्नुस् है म त्यहाँ बैंक खुलेको होला एक्लै हेरेर आउँछु’ भन्दै राईलाई कुराएर लागे। लामो समयसम्म पनि ती व्यक्ति फर्किएनन्। राईलाई सर्वस्व सकिएजस्तो भयो।
‘मैले एक लाख रुपैयाँ कुन बेला उसलाई बुझाएँ, पत्तै पाइन’, राईको भनाई उदृत गर्दै ललितपुर प्रहरी परिसरका एक अनुसन्धान अधिकारीले भने। ती अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार राईले उजुरी गरेपछि उनका कुरा सुनेर प्रहरी सुरुमा पत्याउन सकिरहेको थिएन। तर अनुसन्धान सुरु गरेपछि प्रमाणहरु खुल्दै गए।
घटना भएको पाँच दिनपछि बुधबार प्रहरीले मकवानपुर राक्सिराङ गाउँपालिका-४ का ३९ वर्षीय जय बहादुर घले भन्ने प्रकाश घलेलाई पक्राउ गरेको छ। उनी हाल ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका- १३ कुसुन्ती बस्दै आएका थिए। उनी लकडाउन हुनुअघि गाडि कुदाउँथे।
प्रहरीले सिसिटिभी फुटेजको आधारमा स्कुटीको नम्बर पत्ता लगाएपछि घलेसम्म पुगेको हो। प्रहरीका अनुसार सुरुमा घलेका मामालाई पक्राउ गरिएको थियो किनभने स्कुटी मामाको नाममा थियो। मामाले त्यस दिन भान्जाले स्कुटी लगेको र दिउँसो १ बजे फर्काएको बताएपछि घलेको खोजी सुरु भएको थियो।
‘घलेले सुरुमा घटना स्वीकारिरहेका थिएनन् तर उनको कोठामा पैसा बरामद भएपछि भने आफैले पैसा लगेको बताए। अहिले बुद्धि बिग्रिएको भनेर पछुतो मानिरहेका छन्’, अनुसन्धान अधिकारी भन्छन्।घटना योजनाबद्ध भएकाले घले ‘प्रोफेसनल ठग’ हुन सक्ने र थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ।
भारतीय मिडियाबाटै नेपालका पूर्व सञ्चारमन्त्री डा. मिनेन्द्रले भने – लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापनी नेपाली भूमि हो
कतारबाट दोस्राे चरणमा ६ उडान हुने, आज दुई जहाजले उडान गर्दै
बाँस्कोटामाथि छुट्टै छानबिन गर्नु नपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले गरे बचाउ
तीजमा माइत नजान वडा कार्यालयको अनुरोध